UMichael Owen Ibali leNtsana ngeNgcaciso ye-Biography
ikhaya ISIQINISEKISO SE-CLASSIC FOOTBALLER UMichael Owen Ibali leNtsana ngeNgcaciso ye-Biography
ISIQINISEKISO SE-CLASSIC FOOTBALLER
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leGenius ekhohlo ekhohlo eyaziwa kakhulu ngeSiteketiso; 'Ummangaliso Omntu'. Indaba yethu kaMichael Owen yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lokuzalwa kwakhe. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho, ubomi bomtshato kunye nezinye i-OFF-Pitch facts known about him.
Ewe, wonke umntu uyazi malunga neNkcazelo yoBomi kodwa bambalwa bacinga nge-Biography kaMichael Owen enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, masiqale.
UMnuz Michael Owen Ibali leNtsana neNgcaciso ye-Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
UMichael James Owen wazalwa ngosuku lwe-14th kaDisemba 1979 eKester, eUnited Kingdom.
I-Sagittarius eyazalwa u-Owen ngumntwana wesine wabazali bakhe. Wazalelwa nguJeanette Owen (unina) noTerry Owen (uyise). Wahlala phantse bonke abantwana bakhe bakha ubomi baseHawarden, eWales.
U-Owen waziswa kwibhola eneminyaka engama-7 nguyise owayembona njengomdlali othembisayo kakhulu kwintsapho. Njengomfana ongumfana wase Everton, U-Owen waya kwiRector Drew Primary School e-Hawarden, ePlinthirehire, enyakatho yeWales. Ngeminyaka elilishumi, abanye abaxhasi belizwe abahamba phambili babebeka iliso inkqubela yakhe.
UMichael Owen (ujikeleze emnyama)
U-Owen wayengumdlali othandwa kakhulu kwiqela le-Deeside Area Primary School ye-Under-11.
Le yithuba elithile lahlawula i-Ian Rush ye-20 yeminyaka yecandelo elifanayo ngokubamba iinjongo ze-97 ngexesha elilodwa, ukuphucula irekhodi yeRush ngeenjongo ze-25. Wanikezelwa ngokuphumelela komntwana.
Ngeminyaka eyi-12, xa u-Owen aqala ukuya esikolweni esiphakathi. Le yithuba elifanelekileyo lokuba asayine isivumelwano somntwana wesikolo kunye neqela. Ngeli xesha, abadlali bebhola bebhola bahamba. Iqela eliphambili lokumbona lidlala iDeeside yiLiverpool.
Enyanisweni, kwakuyiSteve Heighway, igosa lophuhliso lolutsha lwaseLiverpool owabhalela uOwen uqobo. Ulawulo lwale qela aluzange luze lusethe umntwana onobubele obuninzi.
UTerry Owen uyise wathi: "[Iindwendwe] wasibhala incwadi ebethayo kwaye kwakuyintando yokuqala kuMichael. Incwadi ethandekayo yeLiverpool inzala ibonise indlela ababeyithande ngayo u-Owen ukususela emini. "
Nangona kunjalo, ngaphambili U-Owen wabanika isayinwe, kwafuneka agqibe iimviwo zakhe zeGCSE apho naye waphuma phezulu kwiklasi yakhe. Naphezu kwempumelelo yemfundo, U-Owen wayemelana nekamva lakhe kwakuyi-professional career yebhola kunye neLiverpool.
Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
UMnuz Michael Owen Ibali leNtsana neNgcaciso ye-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
UOwen wahlangana noLouise Bonsall kwiSikolo saseRector Drew Primary, eHawarden, eClwyd, eNorth Wales. Oku kwakukho ngonyaka we-1984 xa uOwen wayeneminyaka eyi-5 ubudala. Bobabini baba ngabahlobo kwaye bakhulela ukuba babe ngabathandekayo abancinci kwaye emva koko, bathandekayo abadala.
ULouise Bonsall udlalwa ngokuba yi-WAG ongakhetha ihashe kwisikhwama. Ungumgibeli wehashe oqeqeshiweyo. Ngaloo xesha, ngoxa uMichael wayengumdlali webhola obalaseleyo, ukhangela ingqalelo yee-Premiership scouts ukususela kwiminyaka elishumi, uLouise wayesoloko ehamba ngehashe.
Nangona watshata nomnye wabadlali bebhola elidumileyo kwilizwe elidlulileyo kwiminyaka emininzi edlulileyo, uLouise Owen akayiyo i-WAG. Awuyi kumbona ephuma kwii-nightclub, kwaye akabheki nokuthengwa kwezothengiswa kunye nokuzongcola njengemidlalo yokukhuphisana.
Izinto eziphambili kwizinto eziza kuqala kukuba yakhe yintsapho kwaye ihashe yayo yesibini. Yena nomyeni wakhe balinda ubumfihlo babo-ngokuqinisekileyo uLouise akakakaze anike udliwano-ndlebe.
Baye bahlanganyela kwi-14 ngoFebruwari 2004, kwaye batshata ngo-24 Juni 2005, e-Carden Park Ihotela eKester, eKheshire. Esi sibini sasiceba ukuba sitshatile ekhaya kodwa satshintshe izicwangciso xa zaziswe ukuba ukuba ilayisenisi yanikezelwa umcimbi womtshato, indawo kufuneka ifumaneke eminye imitshato iminyaka emithathu.
Emva koko bathetha ukutshata kwiofisi yokubhalisa kwiingubo ezingaqhelekanga kwaye bafumane ukufumana ngokukhawuleza ngosuku olulandelayo kwiindawo zabo. Ngezansi imifanekiso yabo yomtshato.
Ifoto yomtshato kaMichael Owen
Esi sibini sathenga i-Lower Soughton Manor ePlintshire, eNorth Wales, apho igcina imoto yakhe. ULouise Bonsall uthanda amahashe.
Intombi yabo, uGemma Rose, yazalwa ngo-1 Meyi 2003. Njengoko kwakubonwe ngaphambili, uGemma wayebonakaliswe kwimifanekiso yomtshato. U-Owen wanikezela isahluko sonke kwintombi yakhe uGemma kwimbali yakhe, "UMichael Owen: Ukukhuphela kwiRekhodi, i-Autobiography."
Ngo-6 ngoFebruwari 2006, babenendodana egama linguJames Michael. Umntwana wabo wesithathu, intombi, uEmily May, wazalwa ngo-29 Oktobha 2007. Umntwana wabo wesine uJessica wazalelwa ngo-26 Februwari 2010. Ngezantsi umfanekiso weOwen kunye nosapho lwakhe oluhle.
Intsapho kaMichael Owen Ifoto
UMnuz Michael Owen Ibali leNtsana neNgcaciso ye-Untold Biography Facts -Ubomi Bentsapho
UMichael Owen uvela kwintsapho edibeneyo yaseWelsh ngaphambi kokuba utyalomali lwebhola lebhola lihlawulwe. Ngezantsi i-1998 ifoto ye-Owen ekhaya kunye nosapho (uyise, udade omncinci kunye no-Andrew umntakwabo) eNorth Wales.
Kuphela, unabanye abazalwana kunye noodade. Abazalwana bakhe ngu-Andrew Owen, uTerry Junior, uKaren Owen noLesley Partridge. U-Owen ubelokhu ebonwa njengendodana ethandekayo kakhulu kayise owayengumdlali webhola odlala ngaphambili kwaye wadlala kwiiklabhu ezinjengeChester City kunye no-Everton (u-rich-rival neLiverpool yonyana wakhe).
UMichael oselula kunye noyise
Ngezantsi umfanekiso onguJeanette Owen obengumama oziqhenyayo kaMichael Owen.
UJeanette Owen (ngakwesokunxele)
UOwen wathenga isitrato esipheleleyo kwintsapho yakhe e-Ewloe, ephakathi kwendawo ayehlala kuyo.
Ngaphezu koko, Kwi-2004, udadewabo ka-Owen uKaren wabethwa ngabantu abatsha, abazama ukumthumba. Xa ebonisa ukuba ukhulelwe, babaleka. Ekugqibeleni, u-Owen ungumkhwenkwe webhola yomhlalaphantsi uRichie Partridge.
UMnuz Michael Owen Ibali leNtsana neNgcaciso ye-Untold Biography Facts -Uqeqesho lweMetro Madrid
Emva kokuba u-Owen abuyele e-UK esuka kwi-Real Madrid ukuya kudlala iNewcastle, waya kwiziko le-BAE elisondeleyo imihla ngemihla ukuze aphephe, nge-helicopter, ukuqeqesha ngeqela lakhe. Oku kubonakalisa ukuba wayisityebi.
I-Helicopter kaMichael Owen ehla ngomhlaba
I-helipad eyayimiselweyo ifakwe ngaphakathi kwendawo ka-Owen kunye neklabhu yakhe yokuhlala i-helicopter yakhe enhle ahamba ngayo kunye nayo yayisebenzisa ukuqeqesha ekubeni ngumqhubi.
UMichael Owen, egibela iHelicopter yakhe
U-Owen wagqitywa ekuvinjelweni ekuqeqesheni ukuba abe ngumqhubi we-Newcastle United ukuphathwa kwebhola ngenxa yeeprimiyamu ezigqithiseleyo.
UMnuz Michael Owen Ibali leNtsana neNgcaciso ye-Untold Biography Facts -isimo
UMichael Owen unayo iziphumo ezilandelayo kubuntu bakhe obuhle.
Amandla: Ngaphandle kokungathandabuzekiyo, unobumnandi, unomusa, unengcamango kwaye unomdla kakhulu.
Ubuthathaka: Ungathembisa ngaphezu kokunceda, ukuphelelwa ngumonde kwaye uza kuthetha nantoni na kungakhathaliseki ukuba udibanisa kangakanani.
Sagittarius uthanda: UOwen uthanda inkululeko, ukuhamba, ifilosofi kunye nokuba ngaphandle.
Sagittarius ayithandi: UOwen akayithandi abantu abaxhomekeke kuyo, bebanjelwe.
Ngaphezu kwakho konke, unako ukuguqula iingcamango zakhe kwizenzo eziphathekayo kwaye uza kwenza nantoni na ukuphumeza injongo zakhe.
UMnuz Michael Owen Ibali leNtsana neNgcaciso ye-Untold Biography Facts -Ukuhamba kunye neHorama Man
Ngo-Ephreli 2013, u-Owen, kunye nomqhubi we-Formula One uMark Webber, wathenga isigxina esincinci kumncedisi wezokuzonwabisa we-Sportlobster. UOwen unemoto emininzi. Uthando lwakhe lweemoto zezemidlalo lwaboniswa xa yena kunye Wayne Rooney wayenandipha iseshoni yokuqhubela phambili kwiminyaka.
UOwen naye ujabulela ukugijima kwamahhashi okuza kubakho ubuntu bakhe bokugembula. Unemikhosi emininzi, eyaqeqeshwa nguTom Dascombe. Waqhawula ihashe Brown Brown ephumelele umncintiswano omkhulu eRoyal Ascot kwi-2011.
UMnuz Michael Owen Ibali leNtsana neNgcaciso ye-Untold Biography Facts -I-Television Personel
U-Owen naye wazidla ngeenkwenkwezi kwimiboniso yeedrama yabantwana IHero kwiZero. Kwiprogram, u-Owen wayeza kuvela kwi-poster egcweleyo ngokwayo kwigumbi likaCharlie Brice ukuze anikeze iingcebiso ngexesha leengxaki.
QHUBEKA: Siyabonga ngokufunda iNdaba yethu kaMichael Owen yabantwana kunye neengxelo ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke izimvo zakho Qhagamshelana nathi!.
Incwadi yebhola yeLiverpool
I-Eric Cantona Ibali loBuntwana beNqaku leNqaku leNgcaciso yeBantwana yaseNature
UJoseph Antonio Reyes Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Ian Wright Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Francesco Totti Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Iveki ye-Oliseh Ibali leBantwana leNgxelo ye-Untold Biography Facts
I-Ashley Cole Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Dennis Bergkamp Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Rio Ferdinand Ibali leBantwana leNdaba yeNgxelo ye-Untold Biography Facts
URoberto Carlos Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Ricardo Kaka Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
I-Rivaldo Childhood Indaba I-Untold Biography Facts
U-Andrea Pirlo Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Robinho Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Ibali likaGabriel Batistuta Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
URonaldo Luis Nazario de Lima Ibali lokuBantwana kunye ne-Untold Biography Facts